Safiirka Soomaaliya ee Liibiya oo ka warbixiyay kororka dhalinyarada Soomaalida ee tahriib doonkaa. – Radio Daljir
Safiirka Soomaaliya ee Liibiya oo ka warbixiyay kororka dhalinyarada Soomaalida ee tahriib doonkaa.
Seteembar 3, 2012 5:37 b 0
Tripolli, Sep 03- Safiirka Soomaaliya ee Liibiya C/qani Maxamed Wacays oo maanta waraysi siiyay Radio daljir ayaa sheegay inay sii kordhayaan dhibaatooyinka iyo tacadiyaha xoogan ee ay la kulmayaan dhalin-yarada Soomaalida ee doonaya inay ka sii tahriibaan dalka ku yaala waqooyiga Afrika.
Wacays ayaa tilmaamay inay soo siyaadayaan bilba bisha ka danbaysa dhalinyarada ka cararaysa dalka Soomaaliya ee doonaya inay farsamo tahriiba ku galaan wadanka Talyaaniga si ay oga sii gudbaan wadamada kale ee Yurub safarkaas baddaa oo inta badan dhimasho kala kulmaan markay la qaraqmaan doomo aan awood badan lahayn oo ay ka raacaan xeebaha Liibiya.
Safiirka ayaa waraysigiisa ku sheegay inay xabsiyada dalkaasi hada ay ku jiraan in ka badan 700 oo qof oo dhalin-yaro Soomaaliya u badan, kuwaasoo kala kulma nolol aad u liidata mararka qaarna ay kala kulmaan jirdil.
C/qani Wacays ayaa xusay inay dhalin-yarada marin habaabiyaan kooxo calooshood u shaqaystayaal ajanabiya oo dhagta ugu sheego inay su fudud ku geynayaan qaarada Yurub oo ay ka heli doonaan nolol ka fiican mida ay ku haystaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya.
Badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa ah safar dheer oo aalaaba ay isku tijaabiyaan dhalin-yarada Soomaalida ee doonaya inay si gaaban ku galaan Yurub, waxaana dhawrkii bilood ee la soo dhaafay Puntland oo kaliya gaar ahaan magaalo madaxda Garoowe ka tagay boqolaal dhalinyaraa kuwaasoo intaysan gaarin Liibiya sii mara saxaro dheer oo ku yaal xadka Suudaan iyo Liibiya oo qaarkood intaysan gaarin Liibiya dhexda ay ku sii dhintaan kolkay waayaan waxay quutaan.
Iskuulo gaar u ah haweenka ku dhaqan Puntland oo wasaaradda waxbarashada Puntland ay shaacisay inay dhawaan hirgalinayso.